Borkina Fasô : Manampy ireo Borkinabe hiady ny fanampenam-bava ireo blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2007 0:05 GMT
Any Borkina Fasô, tsy fandanian'andro fotsiny ihany ny fitorahana blaogy fa tena manandanja tokoa. Satria ireny no mba maso sy sofina entin'ireo olona aman'arivony eto amin'ny Aterineto [manaraka ny toe-draharaha any an-toerana].
Nandritra ny fankalazana ny fahatsiarovana ny faha-20 taonan'ny namonoan'ny sasany an'i Thomas Sankara, filoha amperin'asa fahizay, izay notanterahina nanomboka tamin'ny 11 Oktobra ka hatramin'ny faha-17 Oktobra 2007, dia notapahina ny tambanjotran'i Borkina Fasô mba hampanginana ny feon'ireo izay nankalaza izany fahatsiarovana izany.
Any amin'ny firenena izay mbola anjakan'ireo tsiambaratelo, dia fanafahana ny toe-tsaina ireo blaogy. Any amin'ny firenena izay mbola anjakan'ny fifehezam-bava sy ny tahotra ireo tsindry aloky ny mpitondra izay mampihorohoro ireo fampahalalam-baovao mahazatra, dia ireo mpiblaogy sisa matetika no hany « tena mpanao gazety ». Izy ireny ihany sisa no hany afaka mamoaka vaovao mirakitra fitsikerana ny governemanta.
Na dia mbola mila miezaka ny ho fata-daza eo anivon'ireo Borkinabe aza ireo Blaogy, misy ihany ireo mponina sy mpanao gazety vitsy an'isa izay efa mpiblaogy. Ny sasany dia mitatitra vaovao efa nampitain'ny gazety, na radio, na fahita-lavitra. Ny hafa dia mamaofivaofy ireo vaovao sady mandanjalanja izay zavatra hitany sy henony.
Misy koa anefa mamoaka lahantsoratra voarara amin-dry zareo. Ny Blaogy dia zary lasa toeran'ny fifandirana, anararaotana ampirehetana adihevitra amin'izay fomba fanaovana pôlitika na koa ny tsy fisian'ny pôlitika any Borkina Fasô.
Noho izany dia tokony heverina ho toy ny fitondrana jadona izay fitondrana tsy mamela ny mponina ao aminy hanana izany fahalalahana ara-pitenenana izany. Izay fanerena an-keriny [na dia an-kolaka aza] dia mikiky mampihena ny kianjan'ny demokrasian'ilay firenena. Ny famehezam-bava sy ny fifehezam-bava dia mamadika ho ringitra ny fahafahan'ny fampahalalam-baovao sy ny fahalalahana ara-pitenenana.
Mahatsiaro tena ho voafehy vava ve ireo mpanao gazety, ny vahoaka koa anie ka mba torak'izany. Ka dia mihevitra ry zareo fa afenina azy ireo zava-marina. Marina fa manana ny toerany izay lehibe ireo « fampahalalam-baovao anelakelan-trano », anefa ny blaogy dia kianja malalaka ahafahan'ny tsirairay mamelatra tsy am-pihambahambana ireo heviny sy mitantara izay iainany amin'ireo mpamaky izay mankasitraka izany.
I Amétépée Koffi, izay isan'ireo mpanao gazety Borkinabe vitsy mitoraka blaogy, dia manantena fa ny fitoratorahana blaogy dia hiteraka fihatsarana anivon'ireo fampahalalam-baovao mitoetra any Borkina Fasô.
« Fanantenako fa, ho hitan'ny masoko hiaradia hanaraka ny onja ireo mpiray tanindrazana amiko sy ireo vahoaka. Manantena aho fa handray anjara amin'izany adihevitra izany ireo fampahalalam-baovao aty Borkina Fasô. Satria afaka ny manondro lalam-baovao hamoaboasana ireo vaovao, lalam-baovaon'ny fomba fitenenana ary lalam-baovaon'ny demokrasia ry zareo … tsy misy famerana na koa famehezam-bava raha ny fanantenantsika »
Ny blaogy mpanohitra le10sident
Ny mpiblaogy mpanohitra Felix Amétépée Koffi dia manambara fa ny antony namoronany ny blaoginy le10sident roa taona lasa izay dia ny hivoy ny fahalalahana ara-pitenenana sy ny fanaovan'ny mponina tatitra ara-gazety izay fiaim-piainany eto amin'ny sehatry ny Aterineto.
Ny ankamaroan'ireo lahatsoratra ao amin'ny le10sident dia efa nivoaka an-gazety tamin'ny gazety mpananihany mivoaka isan-kerinandro Le Journal du Jeudi, izay toeram-piasany rahateo. Ampitain'i Koffi ao amin'ny blaoginy koa ireo tantara na koa tsikera diam-penin'ireo mpiara-miasa aminy.
Lefaso.net, vavahady mitarika ho any Borkina
Lefaso.net dia vohikala vavahadim-pilazam-baovao izay ahitana ireo lahantsoratra navoak'ireo gazety maro any Borkina Fasô. Ary satria afaka mametraka hafatra ireo mpamaky dia azo ambara fa toerana ipoiran'ny adihevitra mikasika lohahevitra maro koa eo.
Lefaso.net dia efa manomboka fanta-daza araky ny ambaran'ireo isa mikasika azy. Tsy lavitra ny 6'000 ny isan'ireo mpamaky nisoratr'anarana ary miisa 2'500 isan'andro kosa ireo mpitsidika ny vohikala, izay monina any Frantsa, sy Borkina Fasô, sy Amerika ary Kanada ny ankamaroany.
Efa-taona taorian'ny namoronana azy dia i Lefaso.net izao no fototra voalohany anovozan'ny diaspaora vaovao avy any an-tanindrazana.
Zavatra bitika misokatra amin'izao tontolo izao
« Tongasoa ianareo rehetra vonona hizara ireo hafaliana sy ireo fahoriana, ireo fanantenana, ireo tolona hoamin'ny rariny, hetsi-pitiavana : Afaka miaina tontolo hafa isika ! » hoy i môpera Lacour ao amin'ny blaoginy.
I Lacour dia ira-piangonana tany Borkina Fasô efa ho 30 taona izao. Nosokafany ny blaoginy mba hizarany ireo vain-dohan-draharahany : i Afrika, ny fiainana Kristiana, ny rariny sy ny fandriam-pahalemana, ny fanangonana hajia sy ny fikarohana ireo rohim-pihavanana.
Ny lahatsorany voalohany nosoratany tamin'ny volana Avrily 2006, dia taratasy hoan'i Nicolas Sarkozy sy ireo ministra hafa misahana ny atitany any Erôpa.
Maro amin'ireo lahantsorany no nosoratany mba havoak'ireo gazety Le Pays na koa ny abcburkina.
Asehoy i Borkina dia ampahafantarò ny vakony
Ny vohikala vavahady monburkina dia manam-paniriana ny hampahalala ireo fomba nentim-paharazana Borkinabe amin'ny famelarana kianja hoan'ireo mpanakanto, mpanao tao-zavatra ary mpitarika mpizaha-tany. Kianja misokatra koa io vohikala io azahoan'izay rehetra liana momba an'i Borkina Fasô mifanakalo hevitra. Monburkina dia manana raki-tsarimihetsika mikasika ireo saron-tava sy ireo dihy netim-paharazana, ary koa sarimihetsika mikasika ny ady amin'ny SIDA sy poezia ary tantara.
« Zonao ny hanam-baovao, takionao izany ! »
« Zonao ny hanam-baovao, takionao izany ! » mitoraka blaogim-baovao koa ny mpanao gazety ao amin'ny L'Opinion, i Frederic Ilboudo.
29 Oktobra 2018Fahalalahàna miteny
Misaotra amin’ny fanitsiana RaJentilisa fa tsy voafehiko tanteraka ilay izy 🙂
31 Oktobra 2007, 10:35
oadray! fa angaha nisy zavatra nahitsiko tao? 😉
02 Novambra 2007, 16:02
Novakiako ilay izy dia ohatry ny misy nanatsara izany dia heveriko fa ianao 🙂
03 Novambra 2007, 08:21
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, Español, English